Tsidika · Mey, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Tsidika · Mey, 2018
Tantara mikasika ny Tsidika tamin'ny Mey, 2018
Amerika Avaratra 30 Mey 2018
Amerika Latina 29 Mey 2018
Nanomboka hatramin'ny fiandohan'ny taona 2009, nanontany tamin'ny fomba samihafa ny momba ny mari-panondroana azy ireo, ny lovam-pireneny sy ny zavatra iainany amin'izao fotoana izao ny Indiana Tandrefana .
Ekoadaoro: Ho anisan'ireo zava-mahatalanjona miisa 7 vaovao eto amin'izao tontolo izao ny nosy Galápagos
Amerika Latina 28 Mey 2018
Nahatafiditra kandidà roa amin'ny fihodinana faharoa hifidianana zava-mahatalanjona miisa fito eto amin'izao tontolo izao tamin'ny fifaninanana antserasera i Ekoadaoro : ny nosy Galápagos (ao amin'ny vondrona B, sokajy "nosy") sy Amazonia (ao amin'ny vondrona F, sokajy "ala, valanjavaboarim-pirenena sy ny valan-javaboary natoraly").
Thailandy: Mpandeha an'arivony voakasiky ny fitokonan'ny fiaran-dalamby
Thailandy 28 Mey 2018
Nanao hetsi-panoherana manohitra ny fanapahan-kevitry ny minisitera ny mpiasa satria tsy ekeny ny hanaovana ho tsy miankina ny orinasan-dalamby. Nofoanana ny fitokonana ny Talata (23/6) tamin'ny hariva, taorian'ny nanomezan'ny manampahefana toky ireo tompon'andraikitry ny sendikan'ny mpiasa fa tsy hisy ny fanaovana tsy miankina ny orinasa
Amerika Latina: ny mpivaromandeha any anaty bisy
Amerika Latina 26 Mey 2018
Hita any amin'ny tanàndehibe rehetra any Amerika Latina ity fisehoan-javatra manaraka ity. Ao an-tanàndehibe, miakatra anaty bisy ny olona iray, na tanora na antitra, na lehilahy na vehivavy, miditra vetivety ao anaty fiara, misaotra ny mpamily namela azy ary avy eo mandeha amin'ny lalantsara mba hampiseho ny entany amin'ny mpandeha......
Manao ny Andranomafanan'i Japana ho sakaizan'ny vondrom-piarahamonina LGBT kokoa
"Ity no fotoana voalohany nidirako tamin'ny fandroana iraisana nandritra ny 13 taona, nahafaly ahy tanteraka izany!"
Ejipta 21 Mey 2018
In-22 izay no nahanika ny tendrombohitra Everest i Kami Rita avy ao Nepal, zavabita tsara indrindra izany
Azia Atsimo 17 Mey 2018
"Manatratra ny tendron'i Everest? Tahaka ny raharaha fanao isan'andro ihany izany."